Adịghị anya ị ga-enwe ike relive dị ebube ụbọchị nke Ịgba Cha Cha na Game Boy na enyemaka nke Smart Boy. Video egwuregwu 'ngwa onye ụlọ ọrụ Hyperkin na-eke ọhụrụ elu-akpọ Smart Boy ahụ ga-abụ ihe tinye-na na na-iPhone 6 Plus na ga-enyere gị na-egwu Game Boy cartridges.
N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ na iPhone ikpe dị na ahịa na-eme ka gị ama egosi dị ka a Game Nnaa, Smart Boy ga-atụgharị ekwentị gị n'ime arụ ọrụ version nke iconic Game Boy obere site Nintendo. Nke a ga-eweta mgbanwe n'etu Ịgba Cha Cha ahụmahụ nke 90 dị ka ị ga-enwe ike na-egwu ọkacha mmasị gị kpochapụwo egwuregwu na a elu mkpebi ihuenyo-enweghị hassle nke ịzụ batrị ọ bụla esote ụbọchị.
Na usoro iheomume nke ihe omume
Ọ bụ ezie na Smart Boy ama a akụkụ nke a ọhụrụ ìgwè nke April nzuzu 'Day prank, na March 31, 2015 Hyperkin na ya ukara Facebook peeji mara ọkwa ya na-abịa elu, na Smart Nnaa, nke ga-ekwe ka ị na-egwu kpochapụwo 80 na 90 egwuregwu on iPhone 6 site n'ịtụgharị ya n'ime a n'ụzọ zuru ezu ọtọ Game Boy.
Gauging ndị dị ịrịba ama mmasị dị otú ahụ a ngwaahịa, ụlọ ọrụ mara ọkwa na ọ ga-ina cracking na-emepe emepe nke a. On April 1, Hyperkin gwa ọzọ na ha Facebook si peeji okwu, "A otutu ị na-ndinọ ekikere esie na Smart Boy bụ ihe April nzuzu 'egwuregwu. Ọfọn, ọ ụdị 'bụ'. Anyị 'leaked' ya na mbụ nzube nke na-anwale ahịa, ebe ma ma ọ bụ na ọ ga-abụ ihe anyị ga-emekwa ka, n'okpuru guise nke April nzuzu 'egwuregwu. "Ọzọkwa ha kelere ndị na-ekiri ha ji ịnụ ọkụ n'obi nkwado, na kwadoro na onye Smart Boy bụ n'okpuru development. Dị ka ụlọ ọrụ eze, ndị Smart Boy bụ na a na-mepụtara maka iPhone 6 Plus. Otú ọ dị n'ebe ga-ọzọ dakọtara smartphones na-eso na-eme n'ọdịnihu. The nostalgia nke 90 si ga-unveiled-eso ukara egbe nke Smart Boy.
All Versions nke Game Boy
E nwere ndị ezinụlọ abụọ nke Game Boy na e wepụtara site Nintendo, onye ọ bụla na a iche iche na usoro nke Game Boy Ịgba Cha Cha usoro. Mbụ ezinụlọ a na-akpọ Game Boy na 4 dị iche iche egwu egwuregwu consoles. The 118,69 nde nkeji nke Game Boy ezinụlọ e rere n'ụwa nile. Mgbe e mesịrị, ezinụlọ ọzọ nke Game Boy ẹkenam akpọ Game Boy Advance. The 81,51 nde nkeji nke 3 consoles nke ezinụlọ a uru ndị Nintendo immensely.
Top 5 Games na Game Boy na Ya Alternative iOS égwu
The Game okoro na Game Boy Advance egwuregwu ndị otu nke kasị mma Ịgba Cha Cha consoles. Ha bụ ndị obibi na kpochapụwo na Evergreen egwuregwu mere rue ụbọchị. Na discontinuation nke Game Boy Ịgba Cha Cha consoles, mkpa maka ọzọ ngwa bilitere n'etiti ndị chọrọ ịnọgidesi ike na otu Ịgba Cha Cha ahụmahụ. A ndepụta nke n'elu 5 egwuregwu na Game Boy na ọzọ iOS ngwa e nyere n'okpuru:
# 1. Super Mario na Super Mario Bros
The Super Mario na Super Mario Bros. bụ sequels ka Arcade egwuregwu Mario Bros. Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma-ere video egwuregwu nke n'oge nile nakwa bụ n'ụzọ bụ maka ịga nke ọma nke Nintendo Entertainment Systems. The IGN si nghoputa kwuru, Super Mario na-'The Kasịnụ Game Of All Time' na-ewere ya na-n'ịkpọlite ​​nkume maka jiri American video egwuregwu ahịa. N'agbanyeghị otú ọtụtụ iri afọ rue ebe ọ bụ na ntọhapụ nke ndị egwuregwu, Mario ga-jide a pụrụ iche n'ebe na gamers 'obi.
Mgbe discontinuation nke Mario usoro, na gamers agụụ ike ha mmasị Arcade egwuregwu. Ka gosiri ha akpịrị ịkpọ nkụ, onye ọzọ iOS egwuregwu na oru akpọ 'Bean nrọ.' Egwuregwu a nwere fọrọ nke nta niile creativity na Mario me na tebụl. The music na video àgwà nwere a ụtọ Nintendo-ịke aesthetic mkpesa na ya.
Pokemon bụ otu n'ime ndị kacha amasị egwuregwu niile oge na hapụrụ ebighị ebi mmetụta na n'uche nke gamers. Ndị kasị mma ugbu a Pokemon mimicker maka iOS n'elu ikpo okwu bụ Micromon. Egwuregwu a nwere fọrọ nke nta niile àgwà nke mbụ Pokemon egwuregwu. The katuunu-dị ka visuals,-agba gburugburu na ahịhịa gburugburu search nke nnukwu anụ na-alụ ọgụ na-achịkọta 'Pokeballs' bụ atụmatụ na-eme Micromon otu nke kasị mma iOS uzo ozo maka Pokemon.
# 3. The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda
Oceanhorn bụ iOS ọzọ maka The Epic egwuregwu The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda. Ọ ga-abụ adaba na-ekwu na Oceanhorn ọzọ bụ ma ọ bụ obere yiri ka The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda na akụkụ nile ma e wezụga aha. The katuunu-dị ka atụmatụ na a yiri oké osimiri-themed njem ifo na-enye gị otu Ịgba Cha Cha ahụmahụ na ị nweburu na-egwu egwu The Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda gị Game Boy.
Amara nke Mario Kart na-anabatawo na iwebata ya ọzọ iOS ngwa maara dị ka The Beach ịnyịnya na-adọkpụ Racing. Ị na-enyere na otu ngwá agha ọgbaghara gị na-emegide 'agba ọsọ, a ọma dịgasị iche iche nke upgradable' Buggys '(nke a na-akpọ' Karts 'na mbụ egwuregwu), na ihe dị ịtụnanya nkedo nke odide. Ọ bụ ezie na, The Beach ịnyịnya na-adọkpụ Racing adịghị nwere ọtụtụ Ịgba Cha Cha nhọrọ, ọ bụ a ga-nwere ihe niile na-Mario Kart Fans. Ndị kasị mma akụkụ nke egwuregwu a bụ na ọ ga-ebudatara for free.
Aza Mars bụ a ga-nwere egwuregwu ndị na-ka nwere nostalgia nke discontinuation nke ha mmasị ohere ngagharị egwuregwu, Metroid. Aza Mars dị maka iOS n'elu ikpo okwu na nwere otu ibé ewere akara nke a ọkà mmụta sayensị bụ onye na-tasked na ịzụlite ihe ilekota na Mars.
Ụzọ na-Tụgharịa iPhone 6 n'ime a Game Boy
E wezụga na-eche Hyperkin ẹkedori ha ngwaọrụ Smart Boy nke ga-eme ka i nwee iji tọghata gị iPhone 6 Plus n'ime a Game Nnaa, e nwere ụzọ ndị ọzọ dị ka nke ọma na-egwu Game Boy egwuregwu na gị ama. Kasị nkịtị irè ụzọ na-wụnye ihe emulator na ekwentị gị na-enyere gị na-egwu ọkacha mmasị gị Game Boy egwuregwu.
N'elu abụọ emulators maka iPhone na-kọwara n'okpuru:
GBA4iOS bụ a Game Boy Advance emulator na-kere site na otu iOS Mmepụta Riley Testut. The emulator-enyere gị na-egwu Game Boy Agba na Game Boy Advance egwuregwu na gị iOS ngwaọrụ enweghị jailbreak. Ndị ọhụrụ mbipute a emulator bụ 2.1 na-akwado iOS 8.1 na 8.2 nsụgharị dị ka mma. The ngwa bụ adịghị na Apple si ngw Echekwala na ya mere, unu ga-eji Safari nchọgharị weebụ na ekwentị gị ibudata usoro ihe omume.
Ka ịmalite ịkpọ egwu Game Boy egwuregwu-eji nke a emulator:
1. Open Safari na gị iPhone na-abanye na nyere njikọ ke adreesị mmanya: http://iemulators.com/
2. Na homepage nke website, enweta égwu taabụ.
3. Site dịnụ nhọrọ, pịgharịa gaa na ala aka ịchọta ndị GBA4iOS emulator.
4. Ozugbo emi odude, enweta akara imeghe isi na peeji nke emulator.
5. Download ma wụnye ngwa na ekwentị gị site na ịme ọpịpị Install button na ala nke meghere page.
6. Ozugbo arụnyere, na-emeghe ngwa site na ịme ọpịpị na akara ngosi nke emulator Site na Ihuenyo gị iPhone.
7. Kpatụ 'Plus' button si n'elu-nri akuku nke isi na ihuenyo ẹkedori na-ngwa nchọgharị weebụ na ibudata egwuregwu na ị chọrọ igwu.
8. Ozugbo download usoro completes na egwuregwu na-akpaghị aka na-egosi na window, ị nwere ike ịmalite ịkpọ egwu na-ahụkarị. Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-eche ihu nsogbu ọ bụla mgbe wụnye ngwa, ị nwere ike na-aga site n'enyemaka Forum. Imeghe Forum, enweta Help taabụ na homepage nke website (dị ọzọ na égwu taabụ).
Gearboy bụ a Nintendo Game okoro na Game Boy Agba emulator e dere na C ++. The Indie egwuregwu Mmepụta, Ignacio Sánchez mepụtara a emulator na isi na-elekwasị anya ịbụ ndị readability nke ndị isi koodu na elu ndakọrịta. Gearboy-akwado ndị niile na nsụgharị nke iOS ngwaọrụ (gụnyere iPhone 5 na ndị ọzọ na retina nyeere ngwaọrụ).
Otu nke kasị mma atụmatụ nke Gearboy emulator bụ na ọ na-akpaghị aka na-azọpụta gị ọganihu oge ọ bụla ị ịgbanwee n'etiti egwuregwu, ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị a egwuregwu inikiet inikiet. Otú a ị ghara ida ọganihu nke gị egwuregwu dị n'etiti. The iOS version nke Gearboy pụrụ ịchọta ma jailbreak na-abụghị jailbreak ngwaọrụ.
Ka ịmalite ịkpọ egwu egwuregwu na iji Gearboy emulator:
1. Mepee Safari nchọgharị weebụ na gị iPhone na-abanye na nyere njikọ ke adreesị mmanya: http://iemulators.com/
2. Kpatụ égwu taabụ si homepage nke website.
3. gbadaa na chọta nhọrọ maka Gearboy na enweta imeghe ya.
4. Na meghere na peeji nke nke Gearboy emulator, enweta Wụnye button na ala nke na peeji nke.
5. Ozugbo arụnyere, pịgharịa site n'ụlọ gị gị na ihuenyo gị iPhone aka ịchọta na akara ngosi nke Gearboy emulator.
6. Kpatụ akara imeghe ngwa.
7. Ị nwere ike ịmalite ịkpọ egwu mgbe ị na ibudata chọrọ egwuregwu si na-ngwa nchọgharị weebụ nke emulator.
> Resource> Game> Tụgharịa iPhone 6 n'ime a-arụ ọrụ Game Boy